I-China Fused Silica Flour Refractory Materials Umkhiqizi kanye Nomthengisi | I-Dinglong
Ufulawa wethu we-silica ohlanganisiwe wenza okokusebenza okuhle kakhulu okukhanyelayo kwezicelo ezahlukahlukene ngenxa yezakhiwo zayo zokumelana nokushaqeka okuphezulu okushisayo, ukuqina kwevolumu ephezulu nokwanda okuphansi kwevolumu.
Ukumelana nokushaqeka okuphezulu, ukushisa kwevolumu ephezulu nokwanda okuphansi kwevolumu
Ufulawa weSilica njengezinto zokuphikisa
Ufulawa wethu we-silica ohlanganisiwe wenza okokusebenza okuhle kakhulu kokuphinda kufakwe izicelo ngenxa yezakhiwo zayo zokumelana nokushaqeka okuphezulu okushisayo, ukuqina kwevolumu ephezulu nokwanda okuphansi kwevolumu. Ufulawa we-silica ohlanganisiwe uvame ukusetshenziswa njengezinto zokuphikisa ekulawuleni ukugeleza nasekusebenzeni okuqhubekayo kokuphonsa okwenziwe ngensimbi, imiqulu yengilazi nokunye.
Izinto zokwenziwa ze-Dinglong fused silica powders zenzelwe ukuvumelana, ukusiza amakhasimende ethu ukuthi akhiqize imikhiqizo ngokunemba nobumsulwa. Ngezinqubo zethu zokugaya nokuxuba ezithuthukisiwe, singaqinisekisa ubumsulwa nokuvumelana kwale mikhiqizo ye-silica ehlanganisiwe nokuthi iyafana ekubunjweni kwamakhemikhali, ukwakheka kwesigaba nokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana. Lezi zimichilo ezihlanganisiwe ze-silica 'chemistry engaguquguquki ziyenza ibe yizinto eziguquguqukayo zokusetshenziswa kuzicelo ze-Refractory, electronics kanye ne-foundry.
I-Dinglong fused silica flours iyatholakala ngokuhlukaniswa kosayizi wezinhlayiyana ezijwayelekile futhi nayo ingenziwa ngezifiso ekucacisweni kwakho. Simema imibuzo yokucaciswa kosayizi wokusanhlamvu okhethekile. Izinhlayiya ze-silika ezifakiwe ze-Dinglong ziyatholakala kuma-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Langaphambilini I-Silica Grain ehlanganisiwe
Olandelayo: I-Silica Powder ehlanganisiwe
Ufulawa weQuartz ohlanganisiwe